Dr. San Martin waa Madaxweynaha iyo Madaxa Fulinta ee Plan International USA, waa hay'ad caalami ah oo xuquuqda carruurta ka shaqeysa in kabadan 70 dal. Hogaankeeda, Qorshuhu wuxuu maalgashi ku samaynayaa kor u qaadista warbixinnada iyo la xisaabtanka iyo adkeynta barnaamijyada beddelashada lamaanaha ee ka hadla sababaha asalka u ah sinnaan la'aanta jinsiga.
Kahor inta uusan ku biirin Qorshaha, Dr. San Martin wuxuu qabtay xilal badan oo sare oo ku saabsan horumarka caalamiga ah. Kuwaas waxaa ka mid ah Madaxweyne ku-xigeenka Kooxda ee Caalamiga ah ee Abt Associates, cilmi baaris iyo shirkad horumarineed oo caalami ah; Agaasimaha Kooxda Howlgalka ee Wakaaladda dammaanadda Maalgelinta Maalgashiga ee Bangiga Adduunka (MIGA), oo kormeeraya ceymiska halista siyaasadeed iyo barnaamijyada kaalmada farsamada; iyo La-hawlgalayaasha Adeegyada La-tashiga IBM (oo hore ula-tashiga PricewaterhouseCoopers), halkaas oo ay mas'uul ka ahayd koontada USAID.
Dr. San Martin wuxuu haystaa Ph.D. xagga Dhaqaalaha Siyaasadda iyo Dowladda ka socota Jaamacadda Harvard, Master-ka xagga Maamulka Dadweynahana wuxuu ka qaatay Dugsiga Dowladda ee Harvard Kennedy, iyo BS ee Adeegga Dibadda ee Jaamacadda Georgetown.